Ọrụ KYC | Law & More B.V.
Beingbụ ụlọ ọrụ iwu na ụtụ isi guzobere na Netherlands, anyị kwesịrị ịgbaso iwu na iwu na iwu na-akwadoghị ego na Dutch na EU nke na-enye anyị iwu nnabata iji nweta ihe akaebe doro anya nke njirimara onye ahịa anyị tupu anyị amalite ọrụ ọrụ anyị na nke anyị mmekọrịta azụmahịa.
Ihe ndepụta ndị a na-egosi ụdị ozi anyị chọrọ n'ọtụtụ oge yana usoro a ga-esi nye anyị ozi a. Ọ bụrụ na, n’oge ọ bụla, ịchọrọ nduzi ndị ọzọ, anyị ga-eji obi ụtọ nyere gị aka na usoro mbido a.
Anyị na-achọ ezigbo akwụkwọ nnabata ezi sitere na akwụkwọ ochie, nke na-egosi aha gị yana nke na-egosipụta adreesị gị. Anyị enweghị ike ịnara mbipụta ndị scanned. Ọ bụrụ na ị pụta na ọfịs anyị na anyị nwere ike ịchọpụta gị ma detuo ederede maka faịlụ anyị.
Paswọdu edebanyere aha (nke edepụtara ma nye ya apostille);
Kaadị njirimara European;
Otu n'ime ụdị ndị a na-esonye ma ọ bụ ezigbo akwụkwọ (nke na-erughị ọnwa 3):
Akwụkwọ ikike obibi;
Gwọ na-adịbeghị anya maka gas, ọkụ eletrik, ekwentị n'ụlọ ma ọ bụ ike ndị ọzọ;
Nkwupụta ụtụ obodo dị ugbu a;
Nkwupụta sitere na ụlọ akụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ego.
N'ọtụtụ oge, anyị ga-achọ akwụkwọ ozi nke ndị ọkachamara na-ahụ maka ọrụ sitere na ya nke ma ọ bụ nke maara onye ahụ na ọ dịkarịa ala otu afọ (dịka notari, onye ọka iwu nwere ego ma ọ bụ ụlọ akụ), nke kwuru na a na-ele onye ahụ anya dị ka onye Onye kwesiri ntukwasi obi nke anaghi ele anya na o sonye na ire ahia ma obu zuo oke, mpụ achiputara ma obu iyi ọha egwu.
Iji rube isi n'iwu achọrọ maka ọtụtụ mgbe, anyị ga-etolite ụdị azụmaahịa gị ugbu a. Ekwesịrị ịkwado ozi a site na ịkọwapụta akwụkwọ, data na isi mmalite ndị a pụrụ ịdabere na ya, dịka ọmụmaatụ:
Nwepụta ihe ndekọ na-adịbeghị anya site na ndekọ azụmahịa;
Akwụkwọ nta azụmahịa na webụsaịtị;
Akụkọ kwa afọ;
Oge a họpụtara ahọta.
Kwenye n ’mmalite nke akụ na ụba gị
Otu n'ime ihe kacha mkpa ị ga-ezute bụ ka anyị guzobe ntọala mbụ nke ego ị na-eji iji kwado Companylọ Ọrụ / Ihe
Agbakwunyere na akwụkwọ (ma ọ bụrụ na a Company / Entity / Foundation aka)
Dabere n'ụdị ọrụ ịchọrọ, usoro ịchọrọ ndụmọdụ na nhazi ịchọrọ ka anyị wulite, ị ga-eweta akwụkwọ ndị ọzọ.